Dhibaatada lagu hayo Suxufiyiinta Somaliland oo la ogaaday cida ka dambeysa | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dhibaatada lagu hayo Suxufiyiinta Somaliland oo la ogaaday cida ka dambeysa
Dhibaatada lagu hayo Suxufiyiinta Somaliland oo la ogaaday cida ka dambeysa
Saddexdii sano ee ugu dambeysay waxaa sii kordhayay dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo Suxufiyiinta ka howlgala Somaliland iyo kuwa ka socda Koonfurta ee ka dega magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha ururka Suxufiyiinta Somaliland ee SOLJA Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto) ayaa la ogaaday inuu isagu kordhiyay dagaalka uu kula jiro Weriyeyaasha iyo warbaahinta ka howlgasha guud ahaan dalka Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Guddoomiye Xuuto ka codsaday maamulka Somaliland in shirkadaha isgaarsiinta ay hawada ka saaraan warbaahinta kuwooda ugu afka dheer, isagoona sheegay in tallaabadaasi mid looga gol leeyahay xasilinta xiisadaha siyaasadeed iyo hannaanka geedi socodka doorashooyinka dhowaan ka dhacay gobolada Somaliland.
Guddoomiyaha ururka Suxufiyiinta Somaliland SOLJA ayaa ka dambeeyay weriyeyaal dhowr ah oo lagu xiray magaalada Hargeysa kuwaasi oo isugu jira kuwo ka tegay Muqdisho iyo qaar ka howlgala qeybaha warbaahinta goboladaasi Waqooyiga Soomaaliya.
Ururrada Caalamiga ah ee u dooda xuquuqda Saxafiyiinta ayaa cambaareeyay dalabka Guddoomiyaha SOLJA, iyagoona sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid lagu caburinayo fekerka xorta ah iyo warbaahinta, waxaana ururradaasi ka mid ah: CPJ , IFJ ,IFEX, REPORTER’S WITH OUT BORDERS iyo DEFENDER’S.
Dhinaca kale Ururka Suxufiyiinta SOLJA oo u janjeera dhinaca dowladda uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamuud Siilaanyo ayaan la ogeyn go’aanka ay xukuumadu ka qaadaneyso, iyadoo muddo 48-saac ah laga joogo markii xabsiga Hargeysa laga sii daayay weriye ka tegay Muqdisho.